Fitongilanan’ny fampahalalam-baovao : notebahin’ny FFKM ny haino aman-jerin’ny fanjakana | NewsMada
Fitongilanan’ny fampahalalam-baovao : notebahin’ny FFKM ny haino aman-jerin’ny fanjakana
Na tsy nanondro mivantana aza, voavely kanonta amin’ny fanambaran’ny FFKM koa ny minisitry ny Fifandraisana. Mazava ny fehinkevitry ny fiangonana nivoaka tamin’ny fihaonan’izy ireo tany Antsirabe ny herinandro teo.
« Momba ny filazam-baovao: Mibahana amin’ny haino aman-jerim-panjakana ny vaovaon’antoko, ka tsy mahazo afa-tsy vaovao tokana ny olona araka ny tenin’ny mpaminany Izaia hoe: famoretana sy fikomiana ny resakay ary lainga fotsiny no foroninay ao am-po, dia avoakan’ny teny ataonay (Izaia 59: 13)”, hoy izy ireo. Mitombina tanteraka izany fanambaran’ny FFKM izany ho an’ny eo anivon’ny TVM/RNM. Tsy mba ahitana loko sy endrika olon-kafa na feon’ny mpanao politika ivelan’ny antokon’ny fitondrana maneho hevitra na mba mahazo avara-patana amin’ireo haino aman-jerin’ny fanjakana ireo. Na misy aza, fihatsaram-belatsihy fotsiny ihany amin’ny segondra vitsy. Nofy izany mpanohitra hahazo sehatra amin’ireo onjam-peo sy fahitalavitry ny fanjakana ireo izany. Mibahan-toerana sy mahazo laka ny antoko HVM. Zary lasa ampihimamba sy giazan’izy ireo izany. Iandrasana any amin’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana amin’ny taona ho avy vao mody homena sehatra ny hevitry ny hafa ? Efa mahazo tombony isan’andro, herintaona mialoha ny antokon’ny fitondrana sy ireo mpanohana azy eo anivon’ny TVM/RNM.
Tsy mahay maka lesona amin’ny tantara…
Midika izany fa tsy mahay maka lesona eo amin’ny tantara ny mpitondra sy ny tompon’andraikitra amin’ny fitongilanana na fitanilana amin’ ny famoahana vaovao. Niara-nahita ny nanjo ireo tranoben’ ny TVM/RNM etsy Anosy nefa vakoka nanana ny tantarany. Potika sy rava ary may… Anisan’ny miteraka lonilony sy valifaty ny fibodoan’ny antokon’ny fitondrana ny fananam-bahoaka tahaka izao ary ahina hampifandrafy noho ny fitongilanana eo amin’ ny famoaham-baovao. Mitaky fahamaroan’ny vaovao sy ny fahasamihafana ary koa hevitra maro loko ny vahoaka.
Araka izany, tsy tokony hanao bemarenina fa hijery ny fomba hanatsarana izany ny tompon’andraikitra voalohany, amin’ny alalan’ny minisitera. Efa mba ny raiamandreny eo anivon’ny fiangonana no miteny…